Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Sokina mifankahita….
Inty sy nday: Sokina mifankahita….
Raha misy tompon’andraiki-panjakana mahafantatra zavatra manodidina ny tontolon’ny fitantanam-bolam-panjakana dia ny filohampirenena sy ny minisitra ny Vola ary ny tale jeneralin’ny tahirim-bolam-panjakana (trésor). Dia lasa ny fisainana teo anoloan’ny raharaha iray mahavoasaringotra an-dRazaimamonjy Claudine, izay niakarany teny amin’ny “Chaine Pénale anti-corruption” tamin’ity herinandro ity, satria dia voasaringotra tamin’io raharaha io ny minisitra ny Vola tamin’ny fotoanandrony, Jean Razafindravonona, sy ny tale jeneralin’ny tahirim-bolam-panjakana tamin’izany fotoana, Robimanana Orlando.
EFa nampoizina fa tsy maintsy hitadiavan’ny Hvm irika hikapana ny ranjony i Robimanaa Orlando raha vao re siosio fa toa manana faniriana hirotsaka hofidiana filohampirenena ny lehilahy. Dia io izy fa nipoitra.
Tsy mitsara ny meloka na diso sy izay manana ny marina isika aloha eto amin’ity “inty sy nday” ity, fa manamarika ihany ny toetsain’ny tompon’andraiki-panjakana.
Dia mino ve isika fa raha nanao tokim-panompoana ny filohampirenena i Robimanaa Orlando, na inona zava-nisy tao amin’ny fitantanany ny tahirim-bolam-panjakna na inona dia ho voarohirohy amin’ny raharaha toa izao? Ary tsy tsapantsika ve fa na inona koa na inona fahamarinan’ny olona iray amin’ny andraikitra nampiantsorohana azy, ka mikitikitika ny tombontsoa manokan’ilay olona mitana ny fahefam-panjakana izany olo-marina izany, dia tsy hamorona’ilay mitana ny fahefam-panjakana antontan-taratasin-keloka mba hikapana ny lohany?
Mpitranga izany na tsy hoe tsy maintsy misy aza, ary tsy mahagaga raha ny fitondrana Hvm no mahavanona izany satria sokajin’olona tsy nobeazaina tamin’ny resaka “pôlitikan’ny fitiavan-tanindrazana” ny maro an’isa manadrafitra ny fitondrana Hvm, mba tsy hilazana hoe izy rehetra, fa tampohin’ny nahazo fahefam-panjakana dia manara-davahana ny toetra-ratsin’ny mpitondra nifandimby teto.
Raha ny tontolon’ny fitantanam-bolam-panjakana no ifampikororohana eto dia izahay mino fa manana zavatra maroloha azo tantaraina i Robimanaa Orlando, momba ny filohampirenena Rajaonarimampianina sataria minisitra ny Vola izy nandritra ny fitondrana tetezamita fa tsy irakiraka akory, sanatriavin’ny vava, na mpamily fiarakodia na mpamafa birao.
Tsy itsikombakombana ny raharaham-panjakana saingy heverina fa takian’ny toe-tsain’ny olom-panjakana ambony ny mitana ny antsoina hoe “tsiambaratelom-panjakana”, raha tsy heloka ilay izy. Fa ny tombontsoa ambonin’ny firenena koa anefa dia manery ny fahendren’ny zanak’olombelona hamboraka ny marina nisy, ary tsara toerana tompon’andraikitra voalohany amin’ireny tahirim-bolam-panjakana ireny tsy hanao tompon-trano mihono ny vahoaka nefa koa dia tsy hamela ny sasany ho tsy maty manota mandrakizay eto. Raha olona hafa mantsy dia mety ho hafahafa ihany fa ianareo samy tao dia tonga amin’ilay fitenenana hoe “sokina mifankahita…”